Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa no hitantsika momba ny tantaram-pitiavana
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'kely tsaramaso'. Ny tantaran-tantaran'i Juan Mata tantaram-pahibemaso sy ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy maromaro no mandinika ny tantaran'i Juan Mata izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Voalohandohan'ny fiainana
Juan Manuel Mata García dia teraka tamin'ny andro 28 tamin'ny volana 1988 tany Villafranca Montes de Oca, Espagne an'i Juan Manuel Mata Sr. (ray) sy Marta Garcia (reny).
Nandimby an'i Juan Manuel Mata Rodríguez rainy ny anaran'i Juan, izay nitady ny zanany hamerina ny fiainany sy ny asany ho mpilalao baolina. Ny dadan'i Mata koa dia mpilalao baolina kely kely nandritra ny fotoanany. Ny fianakaviany dia tsy nanana ny karazan'ny mpilalao baolina. Nosakanan'izy ireo ny lalan-kaleha ary naharitra ela ny fanozonana sy nanaporofo ny tsikera. Izany no nahatonga an'i Juan Manuel Mata Rodríguez naniry ny hanaraka an'i Juan Mata zanany lahy.
Nihalehibe tao an-tanànan'i Ocn de Villafranca, Burgos i Juan, ary tsy nahatsapa velively ny rainy izy noho ny tsy fisian'ny fahafaha-milalao baolina ho an'ny tanora. Tamin'ny taona 5 dia nifindra monina avy ao amin'ny tanàna antsoina hoe Oviedo (Avaratra Andrefan'i Espaina) ny dadany ka nahazo fahafahana baolina kitra. Mata dia navotsotra haingana ary nanomboka nilalao baolina kitra tao. Zanakalahy manetry tena sy miasa mafy izy ary manaja ny ray aman-dreniny ary manaraka ny drafitr'izy ireo ho azy. Nitombo be ny fitiavan'i Mata ny baolina kitra tao Oviedo. Faly ny ray aman-dreniny noho ny zanany lahy ary navelany hitondra ny baoliny eny am-pandriana.
Sary an'i Juan Mata Childhood
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Rising to Fame
Araka ny ambaran'i Mata, "Nandany ny androm-piainako tany Asturias aho, tao Oviedo dia nahafinaritra ahy ary nahatsapa bebe kokoa ny fanatanjahantena tamin'ity fanatanjahantena ity izay ho lasa fitiavan-tanindrazako."
Ny Fanjakan'i Asturias, faritra iray any avaratrandrefan'i Espaina, dia fantatra amin'ny morontsiraka, tendrombohitra, toerana ara-pivavahana sy ny haavon-tsavony. Toeram-piompiana ho an'ny mpilalao baolina kitra ary indrindra indrindra, tokantrano iray ho an'ireo mpilalao baolina kitra any Espana.
Andro manerantany an'i Juan Mata
Real Oviedo no klioba voalohany tao Juan Mata izay nianarany ny milalao baolina matihanina. Mata nomena anarana 'Bean kely' satria izy no kely indrindra sy mahafaty indrindra ao amin'ny ekipany. Izy irery no nitarika ny ekipany handresy ny lozam-piaramanidina lehibe amin'ny maha-zazakely azy. Tsy ela dia nihanihan'i Juan ny tarehin'ny olon-dehibe ho fantatsika ankehitriny.
Araka izay napetrany tao amin'ny tranonkalany Biography mitondra ny lohateny hoe, JuanMata8; "Nandondona tao am-baravarako i Real Madrid fony aho 15 taona tany 2006. Nirotsaka fizarana efatra ho an'ny akademian'ny klioba aho. Nataoko ho mpilalao matihanina amin'ny Castilla aho tao amin'ny Divisiva Faharoa, tsy ela taorian'ny namadika 18 ". Ny 'Bean Little' no notaterina ho ilay lehilahy lehibe indrindra tao amin'ilay Ny Akademian'ny Real Madrid, La Fabrica. Ny fotoana tena tsara indrindra nahatonga azy ho nitarika ny ekipany ho amin'ny sokajy Espaniola Juvenil Cup.
Young Juan Mata ao Madrid
Ny fandresena ho an'i Juan Mata dia nitarika tamin'ny klioban'ny Espaniola manodidina azy toy ny antsantsa. Izy io ihany koa dia midika ho fanerena azy raha ny amin'ny fanosehana ny ekipa ekipa Real Madrid. Na izany aza, tsy azony ny nilalao tamin'ny ekipa Real Madrid tao Madrid noho ny Galaticos lehibe izay tsy azo navotsotra tamin'io fotoana io. Ny fitiavan'i Zinedine Zidane, David Beckham ary ny ekipa mpilalao baolina kitra hafa dia tsy nanome lalana an'i Juan Mata hiditra ao amin'ny ekipa ambony.
Rehefa nandinika ny fisalasalany hiditra ao amin'ny ekipa ambony ao amin'ny Real Madrid izy, ny rainy dia nanao ny hetsika farany mba hisintaka azy hiala ny klioba ka hanolotra azy eo am-pelatanan'ny scouts mba hifaninana amin'ny sonia. Io no Valencia CF izay nahazoany fotoana hanasonia azy.
Mata dia nampiseho ny 174 ary nisintona ny tanjona 46 ho an'i Valencia. Tamin'ny fahavaratra 2011 Arsenal dia nanao tolotra tsara ho an'i Valencia mikasika an'i Juan Mata saingy i Chelsea no nahavita nanasonia ny Espaniola tamin'ny volana Aogositra 2011. Nanjary mpitarika ny klioba tao Londona i Juan ary nifidy ny ekipa mahay indrindra ao amin'ny ekipa ao 2012 sy 2013. Na dia izany aza dia nianjera tamin'i Mata ny mpanazatra vaovao Jose Mourinho ary nitady klioba vaovao tamin'ny vanim-potoana 2013 / 2014. Ny Manchester United dia nilaina tamin'ny famoronana tany afovoan-tany ary nanasonia ny Espaniôla ho an'ny 44 tapitrisa euros tamin'ny Janoary 2014. Ny ambiny araka ny filazany, dia tantara izao.
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakaviana Juan Mata dia manana ny tantarany avy ao Burgos Spain. Teraka tao amin'ny fianakaviana baolina kitra izy izay efa ela no nanaporofo fa diso ny olona. Ireo olona izay mitsikera ny haben'izy ireo sy ny tsy fahafahany mampiseho fifehezana amin'ny fanatanjahan-tena. Niara-nifanampy izy ireo, anisan'izany ny taranany mba hahatonga azy ireo ho liana amin'ny baolina kitra.
Ny rain'i Juan Mata
Nanampy azy hanao ny asany ny rain'i Mata. Mbola kely izy no niorina sy niorina kokoa noho ny zanany lahy. Izy dia mpikatroka matihanina ho an'ny Burgos CF ao amin'ny 80's sy 90's.
Juan Mata dia mitazona mandrakariva ny rainy malalany ho an'ny fiainany mahomby ary mizara mandrakariva ny fotoana mahafaly miaraka aminy sy ny sisa amin'ny fianakaviany.
Juan Manuel Mata Rodríguez dia miasa amin'ny maha-solontenan'i Mata azy, ka lasa FIFA-voasoratra ao anatin'ilay dingana.
Ny dadan'i Juan Mata sy mpitsabo
rENY: Ny renin'i Juan Mata, Marta Garcia dia niafina tamin'ny fampahalalam-baovao noho ny antony manokana. Izy no tsaho fa ny iray amin'ny sary etsy ambany.
Juan Mata Mum (reraka)
Efa zokiny kokoa noho ny dadany izy. Ny maman'i Juan Mata dia efa vadiny manontolo amin'ny fiainany manontolo. Ny olona izay tsy mitovy fiarahamonina, fa manome fanohanana ny trano ho an'ny vadiny sy ny zanany.
Ry Anabavy malalako: Juan manana anabavy be fitiavana sy namana kely antsoina hoe Paula Mata. Paula Mata dia tsy isalasalàna fa ilay mpanohana lehibe indrindra izay tsy mitsahatra ny mivavaka amin'ny sakaizany malalany mba ho sambatra amin'ny asany. Mpinamana be ry zareo hatramin'ny fahazazany.
Ny anabavin'i Juan Mata-Paula Mata
Na eo amin'ny olon-dehibe aza, mbola samy manana ny fotoana izy ireo mba hizara fotoana miaraka ary tsy hanadino na oviana na oviana ny fisakaizan'ny fahazazany.
Juan Mata sy Paula (rahavavy) miara-miasa tsara
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Relationship Life
Manambady ve i Juan Mata? ... Ny valiny dia Tsia. Tsy manambady izy amin'izao fotoana izao, fa miaina ny fiaraha-mientana amin'i Evelina Kamph, ilay sipany malalany.
Ny sipany Juan Mata - Evelina Kamph
Ny sipany, Evelina dia fanta-daza fanta-daza amin'ny media sosialy izay manana lisitry ny mpankafy. Na Mata na ny sipany aza tsy manam-potoana hanambady toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Ny fiainam-pianakavian'i Juan Mata dia mifanandrify amin'izany Marcus Rashford, Alex Oxlade Chamberlain ary Davide Zappacosta. Tena samy hafa sy mifanohitra amin'ny Karim Benzema ary Raheem Sterling.
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Tian'ny Hollywood Celebrities
Juan Mata dia faly ery fa ny fahalemem-panahiny sy ny hatsaram-panahiny dia tena tiany mihitsy na dia ny "Celebrities Holywood" aza. Anisan'ireny, dia i Julia Roberts, kintana Hollywood, izay tsy nanohitra tamin'ny fananana sarin'i Midfield.
Juan Mata sy Julia Roberts
Roberts, izay fantany tsara indrindra amin'ny andraikiny amin'ny fihetsiketsehana, dia lasa mpihetseham-po saro-pady tamin'ny kintana espaniola. Tsy mahavita mijery azy mihitsy izy.
Ny Hollywood A-lister dia nitsidika Traford taloha niaraka tamin'ny vadiny sy zanaka telo mba hijery an'i Juan Mata nilalao ny West Ham. Ny zanany ihany koa dia nanam-bintana niaraka tamin'ireo zanatany Wayne Rooney teo amin'ny laharana taorian'ny lalao.
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Footballer et Scholar
Mata dia tsy tsara fotsiny eny an-kianja, izy koa dia fahaiza-manao akademika. Manana dingana roa i Juan Mata. Iray amin'ny Marketing ary iray amin'ny siansa momba ny fanatanjahantena.
Nanomboka nianatra Marketing izy tao amin'ny Camilo José Cela University nandritra ny nilalaovany tao Valencia. Nanohy ny fianarany izy taorian'ilay fandaharana an-tserasera tao amin'ny Oniversite Teknikan'i Madrid. Nahazo mari-pahaizana momba ny Siansa momba ny Fanatanjahantena izy. Taorian'ny fampiofanana sy ny lalao androany, aleon'i Juan Mata mamaky sy manao fikarohana akademika tsy miankina.
Juan Mata dia mpianatra mahay. Nianatra teny anglisy izy ary nianatra izany tao anatin'ny herintaona nahafantarany fa ny lalan'ny asa dia hitondra azy hitia amin'ny klioba anglisy. Raha niara-niasa tamin'i Chelsea izy, dia tsy nanana fahasarotana mihitsy tamin'ny resaka nifanaovan'ireo mpiara-mianatra anglisy azy tahaka ny nataon'ireo ekipa ekipa espaniola. Indrindra indrindra ny tia an'i Diego Costa.
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:fialamboly
Raha manaraka an'i Mata ao amin'ny tambajotra sosialy rehetra ianao, dia ho hitanao fa tena tia ny tia mandeha sy mahita maso izy.
Ny Espaniola dia miaiky fa nanomboka tamin'ny fahazazany ny fitiavany ny dia, fony izy nampiasa kitapo manodidina an'i Espagne nandritra ny fotoana malalaka.
Tsy isalasalana, Mata dia voatery nandeha an-tongotra. Nahita fitiavana vaovao koa izy tamin'ny fakàna sary. Izany no ataony isaky ny mandehandeha.
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa:Kintana Tennis
Mata dia mpankafy mpilalao tennis ary mihevitra ny tennis superstar, Rafael Nadal ho ilay atleta Espaniola lehibe indrindra. Samy lalao ara-panatanjahan-tena sy namana maro izy ireo.
Juan Mata sy Rafa Nadal
Xavi Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra